🥇 ▷ Microsoft ayaa si lama filaan ah u kashifay 250 milyan oo diiwaanka adeegga macaamiisha ah ee internetka ah ✅
Microsoft ayaa si lama filaan ah u kashifay 250 milyan oo diiwaanka adeegga macaamiisha ah ee internetka ah
Microsoft ayaa ka tagtay adeegga macaamiisha iyo qoraalo taageero ah oo furan oo internetka ah, ayay shirkaddu ku shaacisay mareeg ay qortay maanta. Dhibaatadan waxaa marka hore ogaatay koox cilmi baaris dhanka amniga ah oo uu hogaaminayo Bob Diachenko, iyo xog uruurin furan oo ay kujiraan 250 milyan oo duubista adeega macaamiisha iyo diiwaanada taageerada.
Sida laga soo xigtay Microsoft, kaydka macluumaadka si lama filaan ah ayuu u soo shaac baxay taas oo qayb ka ah khaladaad qaabeyn ah oo ku saabsan qawaaniinta amniga ee ka dhashay isbadalada la sameeyay taariikhda Disember 5. Mashiinka raadinta BinaryEdge wuxuu qaatay keydka macluumaadka 28-kii Diseembar. In kasta oo ay dhacday xilligii fasaxa, Microsoft si dhakhso leh ayay u xallisay dhibaatadan, iyada oo xogta la xaqiijiyey 31-kii Disembar.
Xogta ku jirta diiwaanka waxaa loola jeedaa wada hadallada u dhexeeya macaamiisha iyo kooxda taageerada Microsoft, badanaana xogta ku jirta diiwaanka waxaa loo habeeyay qayb ka mid ah nidaamka Microsoft ee caadiga ah. Si kastaba ha noqotee, xogta qaar ayaa looga tagi karaa qoraal cad, oo ay ku jiraan macluumaadka sida cinwaanada emaylka ee macaamiisha iyo wakiillada taageerada, cinwaannada IP, meelaha, lambarrada kiiska, iyo diiwaannada gudaha ee qarsoon. Sida kooxda cilmi-baarista ee ogaatay dhibaatadan ay tilmaameen, macluumaadkan waxaa u adeegsan kara jilayaasha xun-xun si ay u muujiyaan sidii wakiilo taageera Microsoft oo khiyaaneeya macaamiisha. Si kastaba ha noqotee, Microsoft waxay xustay inaysan helin wax caddeyn ah oo ku saabsan adeegsiga xogta khatarta ah.
Microsoft ayaa sidoo kale sheegtay inay ka go’an tahay ka hortagga xaaladdan oo kale mar labaad inay dhacdo, markaasi waxay qaadatay tallaabooyin isdaba joog ah. Tan waxaa ka mid ah xisaabinta sharciyada amniga shabakadda ee hadda jira, ku daridda digniino dheeri ah marka qalad qaabeed la ogaado, iyo u adeegsiga tifatiraha si otomaatig ah. Shirkadda ayaa sidoo kale ogeysiisay macaamiisha ay waxyeelladu ka soo gaartay dhacdadan.